56+ Amaado Cajiib Ah Madoka Magica Oo Aad Jeceshahay - Kale
56+ ee Xigashooyinka Madoka Magica ee ugu Weyn ee Qoto Dheer
Xigashooyinka Puella Magi Madoka Magica laga soo qaatay astaamaha soo socda:
Madoka Magica waa gabadha ugu fiican sixirka Anime ee aan abid arko. Sababta waa fududahay: Ma aha gabadhaada sixirka caadiga ah ee taxanaha 'Anime'.
Kaa halaabi maayo haddii ay dhacdo inaad weli daawan weydo. Laakiin waa mid ka mid ah bandhigyada gaarka ah ee noociisa ah qoto dheer iyo jilayaal macno leh.
Xigashooyinka anime ayaa tan ka tarjumaya sidoo kale.
Iyadoo taas la yiraahdo, waa kuwan Ugu fiican Madoka Magica Quotes Worth Sharing.
1. Xigasho Junko Kaname
'Haddii aad naftaada ku aragto meel geeri ah oo aan jirin xulashooyin kale oo hadhay, inaad wax u qabato qaab qaldan ayaa laga yaabaa inay sida ugu fiican wax u qabato.' - Junko Kaname
ciyaaro la ciyaaro inta daawashada anime
Isweydii tan: Maxaa fiican, adiga oo aan waxba qaban ama wax qaban. - Junko Kaname
Mararka qaar in qof loo sameeyo wax qaldan waa waxa saxda ah in la sameeyo. ” - Junko Kaname
'Hadba inta madax adag ee qofku helo waxa uu u maleeyo inay sax tahay, ayaa yaraanaysa farxadda uu noqonayo.' - Junko Kaname
Sababtoo ah inaad sii waddo iskudayada inaad sameyso waxa saxda ah, micnaheedu maahan inaad damaanad qaaday dhamaad farxad leh. ” - Junko Kaname
Markasta oo aad sii weynaato, cawaaqib xumadu waa ka sii weyn tahay haddii aad qasto. Xilalka badan ee aad haysaa, khaladaadka yar ee laguu oggol yahay inaad samayso. - Junko Kaname
'Haddii aad baraneyso sida loo qaato hits-ka yar ee nolosha hadda, way kaa caawin doontaa goor dambe.' - Junko Kaname
'Kahor intaadan weynaan waa inaad barataa sida loo sameeyo khaladaadka saxda ah.' - Junko Kaname
2. Xigasho Madoka Kaname
“Haddii qof waligiis ii sheego waa qalad in rajo la qabo, markaa, kaliya waxaan u sheegayaa inay khaldan yihiin. Aniguna waan usheegi doonaa ilaa ay rumeeyaan. Si kasta oo jeer ay u qaadato.! - Madoka Kaname #
Ma ahan wax cadaalad ah inaan faraxsanaado. Gaar ahaan haddii aadan wax khalad ah samaynaynin. - Madoka Kaname
Waan ogahay waxa aan doonayo hadda in ka badan wax kasta oo kale, waxaanan diyaar u ahay inaan noloshayda ku beddelo. Iyadoo aan laga qoomameynin. ” - Madoka Kaname
“Haddaynu saaxiibo badan soo saarno, dadka badan ayaan badbaadinnaa. Marka waa u qalantaa dadaal. ” - Madoka Kaname
'Waxaan rabaa caawimaad, kaliya ma garanayo waxa aan sameeyo si aan mar labaad kuugu farxo.' - Madoka Kaname
'Waxaan ballan qaadayaa inaanan waligay u oggolaan doonin in dadaalkaagu noqdo mid aan micno lahayn.' - Madoka Kaname
“Waad i ilaalineysay waqti dheer, mana ilaabi doono taas. Waan ogahay inaad adigu sabab u tahay inaan ahay qofka aan maanta ahay. Waan ka xumahay.' - Madoka Kaname
'Ka fikir waxa aad sameyneyso, tani sax ma noqon karto!' - Madoka Kaname
Waan ogahay inay danaysi tahay inaan dib uga noqdo hadda, laakiin aniga…. Kaliya waxaan ka fakarayaa qaabka ay u dhimatay, xitaa hada way adagtahay in la neefsado. ” - Madoka Kaname
Waxaa laga yaabaa inaanan waxba ku fiicnayn, laakiin haddii aan ka caawin karo dadka sidaada oo kale markaas waan ku faani karaa habka aan u noolahay. ” - Madoka Kaname
“Been baad sheegaysaa haddii aad dhahdo waxba kuma yeeli doonto. Way ku dhaawacantay daawashadaada. Sababtoo ah ma dareemi kartid xanuunka, macnaheedu maahan inay caadi tahay inaad naftaada dhaawacdo. ' - Madoka Kaname
3. Xigasho Kyoko Sakura
“Ma ogtahay waxa aan u maleynayo? Waxaad qaadataa waxaad heshay oo aad garataa sidaad wax uga soo bixi lahayd. ” - Kyoko Sakura
“Haddii aad ku nooshahay naftaada kaliya waxaa lagugu eedeynayaa adiga. Markaa run ahaantii ma eedeyn karo qof kale, mana qabo wax qoomamo ah. ” - Kyoko Sakura
waa maxay xilliyada ugu fiican waqtiga oo dhan
“Mucjisooyinku xor ma ahan, waad ogtahay. Haddii aad jeceshahay inay wax wanaagsan dhacaan, waxyaabo badan oo xun baa dhici doona sidoo kale. ” - Kyoko Sakura
Awoodaani waa tayda waxaanan u isticmaali doonaa aniga iyo aniga kaligeen. - Kyoko Sakura
“Waxa aan jeclaa inaan baabi’iyo qoyskeyga oo dhan. Dhibaatadan oo dhan waxaan u keenay qoyskeyga maxaa yeelay waxaan u sameeyay aabbahay anigoon ogeyn waxa uu dhab ahaan doonayo. ” - Kyoko Sakura
Waan necbahay in qofna uusan aabahay fursad siinin iskuna dayo inuu fahmo waxa uu ka hadlayo. - Kyoko Sakura
Aad ayey ugu xumaatay qoyskeyga oo waxaa jiray waqtiyo badan oo aanan cunno haysan. ” - Kyoko Sakura
4. Xigasho Sayaka Miki
“Waxaan go’aansaday in wixii hada ka dambeeya, waligey ka xumaan doonin wax uun. Weligay! - Sayaka Miki
“Ma aanan rabin awoodan si aan ula dagaallamo saaxiriinta. Waan rabay sidaas darteed waxaan heli lahaa awood aan ku sameeyo waxa saxda ah oo aan u ilaaliyo kuwa aan jeclahay. ” - Sayaka Miki
Waxaan helayaa rabitaan. Laakiin waa ogtahay, waxaa jira dad kale oo halkaa jooga oo u qalma inbadan. - Sayaka Miki
Farxad kasta oo aad u rajeyso qof, qof kale ayaa lagu habaarayaa silica siman. ” - Sayaka Miki
“Taasi waa go’aan muhiim ii ah inaan qaato. Iyo haddii aan caawin karo, waxaan rabaa inaan hubiyo inaan samaynayo waxa saxda ah. - Sayaka Miki
Waxaa la ii rogay bahal. Sidee wax waligey mar kale iigu wanaagsanaanayaan? Waxa kaliya ee aan hadda sameyn karo waa inaan dilo saaxiriinta. Taasi waa ujeedadayda cusub ee nolosha. Anigu waxba tari maayo. ' - Sayaka Miki
'Haddii aad runti rabto inaad i caawiso, waa inaad isku daydaa inaad nafsaddayda gasho si aad wax uga beddesho.' - Sayaka Miki
Ingiriisiga loogu magac daray liiska anime by sifayn
'Waxaa jira waxyaabo farabadan oo aan rabo inaan sameeyo ama sameeyo, laakiin, waxaa laga yaabaa inay tahay qaybta' naftaada u halista '. Malaha taasi ayaa dib ii celineysa. ” - Sayaka Miki
5. Xigashooyinka Homura Akemi
“Xusuusnow tan oo qalbiga ku hay: Naxariista mararka qaarkood waxay kuu horseedaa masiibo tan ka weyn.” - Homura Akemi
'Waxaan sii wadi doonaa inaan jeclaado adduun aad ku farxi karto.' - Homura Akemi
“Miyaad qiimeysaa noloshaada? Miyaad u malaynaysaa in qoyskaaga iyo asxaabtaadu ay muhiim kuu yihiin adiga? Haddii ay yihiin, markaa waa inaadan waligaa ka fikirin inaad naftaada bedesho. Haddii kale waxaad waayi doontaa wax kasta oo qaali kuu ah. ” - Homura Akemi
“Waxaan u dagaallameynaa rabitaankeenna. Waa wax iska caadi ah inaan lagaa dareemin ama lagaa xasuusan. - Homura Akemi
“Ku celi. Waan ku celin doonaa si kastaba ha noqotee marar badan oo aan ku qasbanahay. Ilaa aan ka helayo wadada kaliya ee aan uga baxo. ” - Homura Akemi
Naxariistu waxay kuu keeni kartaa dhibaatooyin intaas ka weyn. - Homura Akemi
“Marka sidee ku noqoneynaa inaan wax isla wada noqonno? Oo adduunkan rog rogo? Si 'wax xun… ama murugo leh' aysan u sii ahaanin. ” - Homura Akemi
Haddii… Hadday adiga dartaa tahay… wax dhib ah kuma lihi inaan ku xirnaado qalbigayga weligiis ah! - Homura Akemi
“Cid dambe kuma tiirsanaan doono. Waxba igama gelin haddii uusan qofna fahmin. ” - Homura Akemi
'Haddii shar loo malaynayo inuu khalkhal gelinayo rabbaaniyiinta oo uu noqdo xoog fowdo, aniga caadi bay ii tahay aniga inaan ka careysiiyo sharciyada ilaah.' - Homura Akemi
“Maxaad had iyo jeer naftaada sidan ugu hurtaa? Inaad naftaada ugu yeerto wax aan micno lahayn oo aan macno lahayn, iska daa inaad naftaada ula dhaqantid sida aanad waxba u lahayn! - Homura Akemi
6. Xigasho Mami Tomoe
'Haddii aadan hubin sababta aad u sameyneyso, hubaal waad ka qoomameyn doontaa goor dambe.' - Mami Tomoe
'Haddii aad fursad u leedahay inaad si adag uga fikirto waxa aad rabto, waa inaad qaadataa waqti badan inta aad u baahan tahay.' - Mami Tomoe
“Hubso inaad ogtahay waxaad rabto. Fursad sidan oo kale ah kuma soo noqnoqoto marar badan. - Mami Tomoe
“Kama baqayo wax dambe. Maxaa yeelay mar dambe keligey ma ahi. ” - Mami Tomoe
“Ujeedada ka dambeysa rabitaanka ayaa ah waxa ugu muhiimsan.” - Mami Tomoe
waa inuu daawan karaa wakhti kasta waqtiga oo dhan
7. Xigasho Kyubey
Qandaraasyadeenu waxay ku xiran yihiin inaad marka hore ogolaato. Waxaan u maleynayaa in, kaligeed iyo nafteedaba, ay tahay nooc naga mid ah. ” - Kyubey
Meerahan waxaad ugu yeedheen dumar aan weli qaan gaadhin, gabdho. Micno ayey leedahay markaa maadaama aad aakhirka saaxiriin noqon doontid, waa in lagugu magacaabaa Gabdhaha Sixirka ah. - Kyubey
“Miyaad ogtahay inta ilbaxnimo ee isugu tagtay koonkan iyo inta tamar ah ee hal ilbiriqsi lagu isticmaalo? Ugu dambeyntiina, bani-aadamnimaduba, sidoo kale waad ka tegi doontaan meerahan, oo waad nagu soo biiraysaan. Ma dooneysid in laguu gacan geliyo adduunyo madhan, cidla ah markaa, maahaa? - Kyubey
'Maxay tahay sababta ay bani'aadamku uga qoomameeyaan go'aanka ku saleysan ismaandhaafka inay u ciil qabaan dhinaca kale?' - Kyubey
Dhaqankeena, ifafaalaha loo yaqaan shucuurta waxaa loo tixgeliyaa cilad maskaxeed. ” - Kyubey
“Hadaad waligaa dareento inaad udhimanayso si aad ucaawiso koonka, ila socodsii. Waan sugi doonaa. - Kyubey
Madoka Magica kee sheegaa inaad ugu jeceshahay?
Xigashooyinka ugu weyn ee Jinni yaqaan ee dilaaga ah Waxaad ka jeclaan doontaa Anime!
31+ xigashooyin Noragami ah oo raad wanaagsan kugu reebidoona
Puella Magi Madoka Magica Filimka: Kacdoonka figma Devil Homura Aniplex Limited Ku adeego Amazon Wax dheeri ah baro Waxaan ka kasbanaa komishan Amazon & shirkadaha kale hadii aad wax ka iibsato adigoon qiimo dheeraad ah kugu fadhiyin.
anime ugu fiican qiimeeyay waqtiga oo dhan